Calasow, budhcad degelo markhaati beenaad badan. | Somaliland.Org
Calasow, budhcad degelo markhaati beenaad badan.
December 23, 2012	Salaan ka dib, soomaalidu waxay tidhaahdaa beentu lug keliya ayey leedahay. Dhabtii waxaan ku dhereriyey odhaahdaa nin in bdan oo soomaalida caqliga u saaxiibka ah yaqaanaan dhaqankiisa iyo ficiladiisa guracan, inkalena aan filayo inay aqoon badan u yeelan doonaan, ama ugu yaraan bilaabi doonaan deraasad ku saabsan run iyo been waxay yihiin waxa laga sheegayo ninkan.
Anigoo soo dhoweynaya fikir kastoo laga bixiyo mawduucan, waxii macluumaad dheeri ah iiga baahdana u ballanqaadaya inaan soo bandhigo ama gaar ula wadaago, waxaan doonayaa inaad ila daalacataan dhacdooyinka hoos aan ku soo guuriyey, oo is-fasiraya, kuna saabsan taariikhda uu sheegtay calasow iyo xaqiiqooyinka laga sheegay. Jawaabta waxaan u degnayaa inta dalaacata.
Dahir Calasow, ayaa taariikh nololeedkiisa ku qortay saxafi khibrad dheer u leh Radio iyo TV, isla markaana ah, hogaamiyaha Press watchdog ASOJ, tifatiraha degelka waagacusub.com. waxaan ahay difaace xuquuqda iyo danta bulshada, iyo difaacaha danaha ma-yeedhaanka oo qalinkkiisa ugu hiiliyo. Waxa taariikhdan degelka Boocame ugu hambalyeynayaa xilka wasiir, ma runbaa mise been Calasow ayeynu ka sugaynaa
17 November 2011((Hanbalyo)) Warbaahinta Boocame Online oo halkan Hanbalyo & Bogaadin Uga diraya Wasiirka Cusub ee Wasaarada Warfaafinta Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Galmudug State Daahir Abdule Alasow.Daahir Calasow oo ah Halyey Soomaamiyeed inta badana u hiiliya Xaqa, Sidoo kalana waa aqoonyahan inbadan kasoo shaqeeyay warbaahinta Soomaaliyeeed Waa Tifaftiraha Wabsaydka Waagucusub Sidoo Kale Waa Gudoomiyaha Ururka Suxifuyiinta ASOJ.
Mr Daahit ayaanu ku bogaadinayaan Howshaasi Culus ee Shacabku uqabanayo & Siduu dadaal horleh usii Muujin lahaa, Allena waxaanu uga baryaynaa inuu lagarab galo howshaasi.
Mar kale, degelka Galmudugnew, waxa lagu qoray in xil sirdoon loo magacaabay, ma runbaa mise been calasow weli kama jawaabin? 18/11/2012:Madaxweyne Hassan Sheekh Mohamud Alasow ayaa Dahir Abdulle Alasow u magacaabay Agaasime ku xigeenka Sirdoonka Qaranka sida lagu sheegay Wareegto ka soo baxday Madaxweynaha.
Xil magacaabista Dahir Alasow ayaa ku beegan xilli maalmo ka hor loo magacaabay Wasiirka Warfaafinta dhalinyarada iyo Ciyaaraha Galmudug State of Somalia.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Somalia ayaa laga soo xigtay in magacaabista Agaasime ku xigeenka guud ee Sirdoonka Qaranka Somalia ka dhalatay Cadaadis dowlada reer Galbeeda saareen Madaxweynaha Somalia.
Dahir Abdulle Alasow oo Saxaafadda Somalia ka tirsanaa tan iyo sanadkii 1993 ayaa ka aamusan labada xil ee loo magacaabay .
Inkastoo kooxaha argagixisada aad u neceb yihiin Dahir Alasow hadana waxaa la sheegay inuu afar sanadood baranayay Sirdoonka.
Nin ka tirsan Hay”adaha Sirdoonka Geeska Afrika ayaa sheegay in Dahir Abdulle Alasow tababar dhinaca Sirdoonka uu ka helay Dowladaha reer Galbeedka qaar laga soo bilaabo sanadkii 2002.
Sarkaalka oo diiday in magaciisa la xigto wuxuu hadalkiisa ku deray inuu maqlay in Dahir loo tababaray dhageysiga telefoonada iyo Culuumta Internet-ka.
Calasow waxuu ku baahiyey degelkiisa sunatimes, maqaal beenahiisa ka mid ahaayeen “ Kulmiye iyo hjeclo lambarka nasiibkoodu waa 7, markaa komiishanka doorashooyinku natiijooyinkii doorashada deegaamada ayey ku soo saareen in Kulmiye ka helay 7 kursi Hargeysa, Boorama, Burco, laascaanood iyo meelo kale.
Waxaan damcay inaan maqaal jawaab ah u diro, nasiib daro, cid ka jawaabtay ama gelisay maqaalkii ma arag, ciwaanadii aan u diray waa kuw ahoos ku qoran, balse xaqiiqadu muuqanayso inay yihiin magacyo calasow ku raadgadanayo.
Ugu danbayn, akhristayaasha maqaalkan ayaan u dhaafayaa run iyo been midka uu yahay sheegashada calasow ee saxafi difaaca xuquuqda dulmanaha, laakiin, anniga ii rumowday inuu yahay lidka waxuu sheeganayo, markaad hoos u eegtid dhaqankiisa iyo ficiladiisa. Waxaan kaga baxayaa Calasow, budhcad degelo markhaati beenaad badan.
Previous PostGolaha Deegaanka Caasimadda oo Doortay Maayar Iyo Ku xigeenNext PostIsmaaciil Xaaji Nuur oo Markii labaad si sharci ah loogu Doortay Maayarka Ceerigaabo	Blog